GOS-P5: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Google Open Source ကိုရှာဖွေခြင်း - အပိုင်း ၂ | Linux မှ
GOS-P5: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Google Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁
ဤသည်၌ ပဉ္စမအပိုင်း အကြောင်းကိုဒီစီးရီး၏ «Google Open Source » ကျွန်ုပ်တို့မှဖွင့်လှစ်ထားသည့်တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ထားသည့်လျှောက်လွှာများ၏ကျယ်ပြန့်သောတိုးပွားလာသောစာရင်းကိုဆက်လက်လေ့လာသွားပါမည် နည်းပညာဆိုင်ရာiantရာမ de «Google ".
အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာတိုးချဲ့ဆက်လက်နိုင်ရန်အတွက် အက်ပ်များကိုဖွင့်သည် အသီးအသီးအားဖြင့်ဖြန့်ချိ Tech Giants အဖြစ်လူသိများအုပ်စုမှ GAFAM။ များစွာသောသူတို့သိထားပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်းအောက်ဖော်ပြပါမြောက်အမေရိကကုမ္ပဏီများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် - "Google, Apple, Facebook, Amazon နှင့် Microsoft".
စဉ်လေ့လာစူးစမ်းဖို့ ဒီစီးရီး၏ယခင်4အစိတ်အပိုင်းများ အောက်ပါ link ကိုနှိပ်ပါ။
GOS-P1: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Google Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁
GOS-P2: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Google Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁
GOS-P3: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Google Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁
GOS-P4: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Google Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁
1 GOS-P5: Google Open Source - အပိုင်း ၁
1.1 Google Open Source အသုံးချပရိုဂရမ်များ
1.1.2 Firebase SDK
1.1.3 FlatBuffers များ
1.1.7 Forseti လုံခြုံရေး
GOS-P5: Google Open Source - အပိုင်း ၁
applications များ Google ၏ Open Source
၎င်းသည် ၁၀၀% ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဆော့ဝဲလ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် iOS နှင့် Android အတွက်အပလီကေးရှင်းများဖန်တီးခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလိုအလျောက်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်စေရန် MIT လိုင်စင်အောက်တွင်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သော software tool သည် screenshots များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သင်၏ code signing ကိုစီမံခြင်းနှင့်သင်၏ application ကိုထုတ်ခြင်းစသည့်ခက်ခဲသောအလုပ်များကိုဂရုစိုက်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်မိုဘိုင်း application တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်အသုံးပြုရန်အတွက်လိုအပ်သောအဆင့်များကိုသတ်မှတ်ရန်၎င်းကို configure လုပ်ရုံဖြင့်ကျန်ရှိသောအရာများကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ပိုမိုကြည့်ရှုပါ: Google Open Source၊ GitHub y တရားဝင်ဝက်ဘ်.
၎င်းသည်အရည်အသွေးမြင့် application များကိုတည်ဆောက်ရန်၊ လျင်မြန်စွာကြီးထွားရန်နှင့်၎င်းကို၎င်း၏ developer များအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်အတွက်ကိရိယာများပါသောလျှောက်လွှာတင်ခြင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် Firebase ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအလိုအလျောက်ထိုးဖောက်သိမြင်စေသောနည်းလမ်းဖြင့်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။ SDK အစိတ်အပိုင်းများသည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုပိုမိုမြင့်မားစေရန်နှင့် GitHub တွင်လူထုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန် open source ဖြစ်သည်။ ပိုမိုကြည့်ရှုပါ: Google ၏ Open Source, GitHub y တရားဝင်ဝက်ဘ်.
၎င်းသည်မိုဘိုင်း application များအတွက် Open Source SDK တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် code တစ်ခုတည်းမှ iOS နှင့် Android အတွက်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်မြင့်မားသောသစ္စာရှိမှု application များကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ၎င်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ scrolling အပြုအမူများ၊ စာရိုက်ခြင်း၊ အိုင်ကွန်များနှင့်အခြားဒြပ်စင်များအကြားကွဲပြားခြားနားမှုများကိုကွဲပြားခြားနားသောပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်သဘာဝကျသည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုကမ်းလှမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့် Operating System တွင်မဆို mobile နှင့်ကျော်လွန်သောလှပသော application များကိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာပြုလုပ်နိုင်စေသည်။ ပိုမိုကြည့်ရှုပါ: Google ၏ Open Source, GitHub y တရားဝင်ဝက်ဘ်.
၎င်းသည်လိုအပ်သောဖောင့်များကိုစစ်ဆေးရန်အသုံးဝင်သည်။ ဖောင့်များ၏ဗားရှင်းများအကြားအမြင်အာရုံကွဲပြားမှုကိုရှာဖွေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော software တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် TrueType သို့မဟုတ် OpenType ဖောင့်ကိုပြုပြင်ချိန်တွင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်၊ FontDiff သည်ပြောင်းလဲမှုမတိုင်မီနှင့်အပြီးတွင်စာစီစာရိုက်သည့်စာသားကိုပြသော PDF ကိုထုတ်ပေးသည်။ PDF ဖိုင်များဖြင့်ပြောင်းလဲမှုများကိုအလွယ်တကူပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး font ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်မည်သည့်အမှားအယွင်းကိုမဆိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ပိုမိုကြည့်ရှုပါ: Google ၏ Open Source y GitHub.
၎င်းသည် text rendering stack ကို အသုံးပြု၍ ဖောင့်များကိုပြသသောအခမဲ့၊ ပွင့်လင်း။ အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ဖိုင်ဖိုင်တစ်ခု၏အကြောင်းအရာကိုပြသသောသေးငယ်သောသရုပ်ပြ application ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် * .ttf, * .otf, * .ttc, * .otc, * .pfa နှင့် * .pfb ဖိုင်များကိုဖွင့်နိုင်သည်။ စာသားကိုပြန်ဆိုရန် FontView သည် open source စာကြည့်တိုက်များကို FreeType, HarfBuzz နှင့် Raqm ကိုအသုံးပြုသည်။ ပိုမိုကြည့်ရှုပါ: Google ၏ Open Source y GitHub.
၎င်းသည်ဂူဂဲလ်တိမ်တိုက်ပလက်ဖောင်း (GCP) ပတ် ၀ န်းကျင်များ၏လုံခြုံရေးကိုတိုးမြှင့်စေရန်လူထုအခြေပြုပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ကိရိယာများစုဆောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်သက်ဝင်လှုပ်ရှားခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်သီးခြားလွတ်လပ်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အခြေခံ module များပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်ထူးခြားသောစွမ်းရည်များပေးနိုင်သည့်ထပ်ဆောင်း module များ။ သို့သော်၊ အဓိကကျသည့်အပိုင်းများသည်အတူတကွအလုပ်လုပ်ပြီးအခြားသူများတည်ဆောက်နိုင်သည့်အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
မှတ်သားထိုက်သည်မှာ Forseti သည်လုံခြုံရေးအနေအထားတစ်ခုတည်းကို encode လုပ်ရန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပေါ်လစီများဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုခြင်းသည်မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ တစ်ခုခုမမျှော်လင့်ဘဲပြောင်းလဲသွားလျှင်၊ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်းနှင့်လူသိများသောပြည်နယ်သို့အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ပါ ၀ င်သောအရေးယူမှုကိုပြုလုပ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် Forseti သည် GCP လုပ်ငန်းခွင်ပတ် ၀ န်းကျင်အတွင်းရှိသင်၏လုံခြုံရေးကိုသင့်တင့်လျောက်ပတ်သော၊ ပိုမိုကြည့်ရှုပါ: Google ၏ Open Source, GitHub y တရားဝင်ဝက်ဘ်.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ၏ဤပဉ္စမရှာဖွေရေးအပေါ် «Google Open Source», Technological Giant မှတီထွင်ထားသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကျယ်ပြန့်သောကျယ်ပြန့်သော application များကိုပေးသည် «Google»; တစ်ခုလုံးအတွက်, ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » GOS-P5: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Google Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁
Flutter နှင့် Forseti တို့
CyberBattleSim, Microsoft မှဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှု Simulator